အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သောင်းပြောင်းထွေလာ မှတ်တမ်းများ
9 Nov 2018 . 12:35 PM
ဘောလုံးလောကဆိုတာ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး စံချိန်မှတ်တမ်းတွေဆိုတာကလည်း တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင်ပါပဲ။ အဲဒီထဲကမှ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ အချက်အလက်တွေ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ် သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် . .
၁. နော့စ်ကောင်တီအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ဟယ်ရီကီးဝဲလ် Harry Kewell
လိဒ်စ်၊ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ တစ်ချိန်က ပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကျော် တိုက်စစ်ကစားသမား ဟယ်ရီကီးဝဲလ် Harry Kewell ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ကစားသမားဘ၀က အနားယူပြီး နည်းပြလောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ ဟယ်ရီကီးဝဲလ်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ မြင်ကွင်းထဲက ပျောက်ကွယ်သွားတာ ကြာပါပြီ။ အခု သူဟာ League Two ကလပ် နော့စ်ကောင်တီ နည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာ ချန်ပီယံလိဂ်လို ဆုဖလားမျိုး ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဟယ်ရီကီးဝဲလ်ဟာ နည်းပြဘ၀မှာတော့ ရုန်းကန်နေရပြီး အောင်မြင်မှု လမ်းစကို ရှာဖွေနေရဆဲပါပဲ။
၂. ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ရာသီလုံးမှာ အိမ်ကွင်း (၁၀)ဂိုးသာ သွင်းခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယမဖြစ်ပါနဲ့။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် အသင်းဖြစ်နေပေမယ့် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်တုန်းက တန်းဆင်းလိုက် တန်းတက်လိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီတုန်းက အိမ်ကွင်းပွဲစဉ် (၁၈)ပွဲမှာ (၁၀)ဂိုးသာ သွင်းခဲ့တဲ့အထိ အခြေအနေဆိုးခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး (၈)ပွဲဆက် ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး စံချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၃.ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်းမှာ အသံအကျယ်ဆုံး အားပေးကြတဲ့ ၀ုလ်ဗ်ပရိသတ်များ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၀ုလ်ဗ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကတော့ တကယ့်ကို လေးစားစရာပါပဲ။ ၀ုလ်ဗ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာ သူတို့ပရိသတ်တွေ အော်ဟစ်ကြတဲ့ အသံနှုန်းက ၈၅ Decibels အထိ ရှိပါတယ်။ သာမန်အတိုင်းမှာ ၇၅ Decibels ဆိုရင် အကြားအာရုံ ထိခိုက်မှု မရှိပေမယ့် ၈၅ နဲ့အထက် ဆိုရင်တော့ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်စေပြီး နားမကြားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ုလ်ဗ်ပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒါတွေကို သိပ်ဂရုစိုက်တဲ့ပုံ မပေါ်ပါဘူး။
၄. ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ Assist (၁)ကြိမ်သာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘာလိုတယ်လီ Mario Balotelli
ဘောလုံးလူဆိုး ဘာလိုတယ်လီဟာ မန်စီးတီးအသင်းမှာ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ဖူးပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။ အသင်းအတွက် ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့ပေမယ့် ဘာလိုတယ်လီဟာ အသင်းဖော်တွေကို ဂိုးသွင်းခွင့်ရအောင် ဖန်တီးနိုင်မှုမှာတော့ အတော်အားနည်းခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခဲ့တဲ့ (၃)ရာသီအတွင်း ဂိုးဖန်တီးမှု (၁)ကြိမ်သာ လုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒါကတော့ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီ QPR နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီပိတ်ပွဲတုန်းက အဂွဲရိုး Sergio Aguero ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တာပါပဲ။
၅.ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်သူမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ မှတ်တမ်းပိုင်ရှင် ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale
စပါးအသင်းနဲ့အတူ ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ မှတ်တမ်းက တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။ တစ်ပွဲတည်းမှာပဲ ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီး၊ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်း၊ အ၀ါကတ်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး ဘယ်သူမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက စပါးအသင်းရဲ့ ၀ှိုက်ဟတ်လိန်းကွင်းမှာ လီဗာပူးလ်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်က အဲဒီ ထူးထူးခြားခြားမှတ်တမ်းကို ဂါရတ်ဘေးလ် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။
Photo:Calcio Fanpage,dreamteamfc,Manchester City
အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကနဲ့ပတျသကျတဲ့ သောငျးပွောငျးထှလော မှတျတမျးမြား
ဘောလုံးလောကဆိုတာ ထူးခွားဆနျးကွယျတဲ့ အကွောငျးအရာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပွေီး စံခြိနျမှတျတမျးတှဆေိုတာကလညျး တဈနတေ့ဈမြိုး မရိုးရအောငျပါပဲ။ အဲဒီထဲကမှ အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှထေဲက ကောငျးနိုးရာရာ အခကျြအလကျတှေ၊ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား နာမညျကြျော ကစားသမားတှရေဲ့ အကွောငျးတှကေို ဗဟုသုတအဖွဈ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးခငျြတာဖွဈပါတယျ . .
၁. နော့ဈကောငျတီအသငျးကို ကိုငျတှယျနတေဲ့ ဟယျရီကီးဝဲလျ Harry Kewell
လိဒျဈ၊ လီဗာပူးလျအသငျးတို့မှာ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ တဈခြိနျက ပရီးမီးယားလိဂျ နာမညျကြျော တိုကျစဈကစားသမား ဟယျရီကီးဝဲလျ Harry Kewell ကို ပရိသတျတှေ မှတျမိကွဦးမှာပါ။ ကစားသမားဘဝက အနားယူပွီး နညျးပွလောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့တဲ့နောကျမှာတော့ ဟယျရီကီးဝဲလျဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ မွငျကှငျးထဲက ပြောကျကှယျသှားတာ ကွာပါပွီ။ အခု သူဟာ League Two ကလပျ နော့ဈကောငျတီ နညျးပွအဖွဈ ဆောငျရှကျပွီဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝမှာ ခနျြပီယံလိဂျလို ဆုဖလားမြိုး ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ဟယျရီကီးဝဲလျဟာ နညျးပွဘဝမှာတော့ ရုနျးကနျနရေပွီး အောငျမွငျမှု လမျးစကို ရှာဖှနေရေဆဲပါပဲ။
၂. ပရီးမီးယားလိဂျတဈရာသီလုံးမှာ အိမျကှငျး (၁၀)ဂိုးသာ သှငျးခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး
ခေါငျးစဉျကို ဖတျပွီး ဟုတျမှဟုတျရဲ့လားလို့ သံသယမဖွဈပါနဲ့။ ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ မနျစီးတီးအသငျးက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ထိပျတနျးစာရငျးဝငျ အသငျးဖွဈနပေမေယျ့ လှနျခဲ့သော ဆယျစုနှဈတဈခုကြျောတုနျးက တနျးဆငျးလိုကျ တနျးတကျလိုကျဖွဈနတောပါ။ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီတုနျးက အိမျကှငျးပှဲစဉျ (၁၈)ပှဲမှာ (၁၀)ဂိုးသာ သှငျးခဲ့တဲ့အထိ အခွအေနဆေိုးခဲ့ပွီး နောကျဆုံး (၈)ပှဲဆကျ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ အဆိုးရှားဆုံး စံခြိနျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
၃.ပရီးမီးယားလိဂျ အိမျကှငျးမှာ အသံအကယျြဆုံး အားပေးကွတဲ့ ဝုလျဗျပရိသတျမြား
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဝုလျဗျပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကတော့ တကယျ့ကို လေးစားစရာပါပဲ။ ဝုလျဗျအသငျးရဲ့ အိမျကှငျးပှဲစဉျတှမှော သူတို့ပရိသတျတှေ အျောဟဈကွတဲ့ အသံနှုနျးက ၈၅ Decibels အထိ ရှိပါတယျ။ သာမနျအတိုငျးမှာ ၇၅ Decibels ဆိုရငျ အကွားအာရုံ ထိခိုကျမှု မရှိပမေယျ့ ၈၅ နဲ့အထကျ ဆိုရငျတော့ အာရုံကွောတှကေို ထိခိုကျစပွေီး နားမကွားတာမြိုးတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဝုလျဗျပရိသတျတှကေတော့ အဲဒါတှကေို သိပျဂရုစိုကျတဲ့ပုံ မပျေါပါဘူး။
၄. ပရီးမီးယားလိဂျမှာ Assist (၁)ကွိမျသာ လုပျခဲ့တဲ့ ဘာလိုတယျလီ Mario Balotelli
ဘောလုံးလူဆိုး ဘာလိုတယျလီဟာ မနျစီးတီးအသငျးမှာ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့ဖူးပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တယျ။ အသငျးအတှကျ ဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့ပမေယျ့ ဘာလိုတယျလီဟာ အသငျးဖျောတှကေို ဂိုးသှငျးခှငျ့ရအောငျ ဖနျတီးနိုငျမှုမှာတော့ အတျောအားနညျးခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကစားခဲ့တဲ့ (၃)ရာသီအတှငျး ဂိုးဖနျတီးမှု (၁)ကွိမျသာ လုပျခဲ့ပွီး အဲဒါကတော့ ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီ QPR နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီပိတျပှဲတုနျးက အဂှဲရိုး Sergio Aguero ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့တာပါပဲ။
၅.ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘယျသူမှ မစှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ မှတျတမျးပိုငျရှငျ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale
စပါးအသငျးနဲ့အတူ ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ ဂါရတျဘေးလျရဲ့ မှတျတမျးက တကယျ့ကို ထူးထူးခွားခွားပါပဲ။ တဈပှဲတညျးမှာပဲ ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီး၊ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျး၊ အဝါကတျပွခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဒီလိုမြိုး ဘယျသူမှ မစှမျးဆောငျနိုငျသေးပါဘူး။ ၂၀၁၂ ခုနှဈတုနျးက စပါးအသငျးရဲ့ ဝှိုကျဟတျလိနျးကှငျးမှာ လီဗာပူးလျနဲ့ ဆုံတှခေဲ့စဉျက အဲဒီ ထူးထူးခွားခွားမှတျတမျးကို ဂါရတျဘေးလျ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာပါ။